Bond, Patrick Translation ka-Manzi, Faith (2012) Protest and Repression in South Africa. : -.
Patrick Bond 29 May 2013
It’s been a hot winter, and we’re just halfway through July (the Centre for Civil Society’s Social Protest Observatory keeps tabs:). Consider evidence from just the past two weeks, for example, in Johannesburg’s distant Orange Farm township south of Soweto, where residents rose up against city councillors and national electricity officials because of the unaffordable $250 installation charged for hated prepayment (i.e. self-disconnection) meters, not to mention a 130% increase in electricity prices since 2008.
The incident comes just after the unsolved murder of regional ANC leader Wandile Mkhize on July 2, immediately following the ruling party’s controversial policy conference.
Mkhize’s last SMS – to former ANC Youth League leader Fikile Mbalula – included the confession, “The stories and lies we fed as members to some of you in leadership further served to deepen the contradiction,” i.e., between the youth and ruling party’s national executive.
Patrick Bond directs the Centre for Civil Society in Durban
Ukubhikisha kanye neNgcindezi eNingizimu Afrika
Ngu Patrick Bond Yahunyushwa nguFaith ka-Manzi
Lezizibhelu ezingenakho ukuhlanganyela zemiphakathi ezigcwele izwe lonke laseNingizimu Afrika ziqinisekisa ubunhlakanhlaka mayelana nezimo zezenhlalakahle, zomnotho kanye nezemvelo. Kodwa uma izishoshovu ziqothwa ngenhlamvu ngamaphoyisa, noma ziswele indlela yezombusazwe ehlanganisa ukubhekana nazo zonke lezizikhalazo eziholela kwizibhelu, ngabe ukubhiyoza kwabo kuyavela bese kuyashabalala masinyane kubuyele emuva – kuze kubizwe ngegama eliyisiqalekiso lokhu – “ízibhelu ezivela manje –zishabalala kusasa” – uma lezizibhelu seziphelelwa ugqozi, noma okubi kakhulu, sezisetshenziswe ngosomathuba ukuthi bahlasele abafowethu basemazweni aseAfrika abfikela kuleli?
Bekungubusika obushisayo, futhi manje sesimaphakathi nenyanga kaNtulikazi (iCentre for Civil Society inomtapo wezibhelu -the Centre for Civil Society’s Social Protest Observatory keeps tabs: ). Ake ubheke nje ubufakazi bamasonto amabili edlule, ngokwesibonelo-nje, eGoli elokishini laseOrange Grove eningizimu neSoweto, lapho izakhamizi zabhikisha zimelele namakhansela edolobha kanye nezikhulu zemboni kagesi zikazwelonke mayelana nokufakwa kwamamitha kagesi azondwayo oqale ukhokhelwe u$250 (ngakho-ke bakugqashula lokho kuxhunywa) singasabali-ke ukunyuswa kwamanani kagesi ngo130% kusukela ngo2008.
Eduzane-nje, emijondolo yaseHolomisa eBoksburg, izishoshovu ezingu50 zaboshwa emva kokuvimba imigwaqo ngamathayi avuthayo. Ngokunjalo, echwebeni lase East London, elokishini lase-Egoli, ukunikezwa kwabantu izindlu kwaba nokungavumelani okwaholela eesibhelwini sesikhashana, kwathi ePort Elizabeth ukuvinjwa kwemigwaqo okwabanedumela kakhulu kwizibhelu lapho umphakathi waselokishini laseWalmer lalikhaza ngokungalethwa kwezidingongqangi kwavele kwashabalala.
Eduze nomngcele waseBotswana eduze naseMorokweng esifundazweni saseNorthwest, idlanzana lezakhamizi lithukutheliswe ukungabikhona kwezizinda zombuso ngokwanele zaboshelwa ukushisa, udlame emphakathini kanye nokucekela phansi impahla yasesikoleni, kulandela izinyanga zozokubhikisha okwakungenadlame okwase kubacasulile; ngesikhathi bekomkhulu lesifunda eMahikeng, i-Independent Police Investigative Directorate yaqala uphenyo lowafa mhla zingu4 kwinyanga kaNtulikazi: “Umufi kusolakala ukuthi wadutshulwa futhi wagandaywa ngemoto ngamaphoyisa ngesikhathi kunesibhelu mayelana nokungalethwa kwezidingongqngi endaweni.”
Kwikomhulu lesifundazwe saseFree State eBloemfonteni, ababhikishi abangu300 bavimba umgwaqo omkhulu ngamatshe, futhi kwenye ingozi eseceleni, ngesikhathi amaphoyisa kamasipala eqala ngendluzula esusa abadayisi basemgaqweni kwinxanxathela yezitolo, umbhikisho womphakathi wabe usuyashintsha unyawo lwayo wabheka kwenye indawo: kusukela kumasipala ononya kuya kwezinye izisulu, abadayisi basemazweni okufika. Lesisibhelu saphoqa ukuthi ababalelwa ku500 ukuthi babaleke, kubuyisa inkumbuzo ukuhlaselwa okwadlula nemiphefumulo yabokufika maphakathi kuka2008 kanye namaphakathi ka2010; amaphoyisa abopha abantu abangu100.
Emva kwezinsukwana, kwaphinda futhi lokho kabili eKapa, elokishini elikhulu laseMitchells Park eduze kwesizinda samabhanoyi, lapho abomphakathi abacwasa abokufika behlasela izitolo abanikazi bazo okungabaseSomali. Iziphukuphuku eziqhamuka kubuholi obuphezulu bukaKhongolose kulesisifundazwe zazibasele lomlilo ngemigomo esobala eqondene nokwenizwa ukuthi izitolo abanikazi bazo ezingabokufika zenziwe ezingekho emthethweni.
Kubonakala sengathi, kulokhu kujwayeleka, ukuthi lezizibhelu ezikhona namhlanje zishabalale kusasa zibe khona isikhashana ukuze osomathuba bavuvuzele inzondo yokucwaswa kwabokufika, uma ngabe umoya wezabombusazwe ushintsha ekumeleni abantu umela ongxiwankulu futhi izakhamizi zicabanga zanze ngemibono yabantu abahlala kulelizwe, okwenza bangacabangi ngokuzwelana mayelana nezizathu ezenza ezinye izizwe zaseAfrika ziphoqeleke ukuthi zizokhosela eNingizimu Afrika futhi ngalokho sibonga imigomo yasePitoli yokubusa ngokusabalala kwezombusazwe kanye nezomnotho.
Imibhikisho yaseThekwini iyakhula
ITheku kulezizinsuku iyona ndawo ezmibhikilisho eminingi, okuhlanganisa ngisho ukubhikisha kwezifundiswa ezinedumela ngaphakathi edolobheni: ukumasha okunokuthula okumelene nababulala obhejane kanye nokubhikisha mayelana nokuhlukunyezwa kwezilwane eBrian Boswell Circus.
Umbhikisho waoba nokucekela kakhulu phansi ilowo owawungowokuhlala emgwaqweni obaluleke kakhulu, uMngeni, ngoLwesithathu olwedlule yizakhamizi ezazinolaka olumangalisayo zasemjondolo yasePuntan’s Hill. Oyedwa wamabhikishi wabulawa kanti ababili balinyazwa, beshayiswa ngumshayeli wemoto ngehora lesine ekuseni okumanje esebekwe icala lokubalala ngenhloso, noma-ngabe ebeka sizathu sokuthi umsulwa wayezama ukubalekela ukuvinjwa komgwaqo.
Lengozi yadalwa ngamalunga kaKhongolose omphakathi aba yizisulu zikamasipala olwawulwa iqembu likaKhongolose owanqamula ukusetshenziswa kukagesi ngokungemthetho abawufaka emijondolo yawo. Futhi bakhononda ngokukngakhelwa izindlu ngale kwezithembiso eziphindaphindiwe ezivela kwikhansela labo. Njengomphumela walombhkisho, izishoshovu zasePuntan’s Hill zathola ukuzibophezela kabusha okuvela kwizikhulu ukuthi izindlu ezintsha zizokwakhiwa masinya futhi eminye imindeni iyosuswa ibekwe lapho kwakhiwa khona izindlu, eCornubia, eduze kwendawo lapho kuhlala khona abacebe kakhulu kulelidolobha, eMhlanga.
NgoLwesine olwedlule,kwenye imashi yaseThekwini, yizishoshovu Zokulashwa kwalabo abaphila negciwane leNgculaza – yaphelela eCity Hall kodwa yayiqondiswe ikakhulukazi kuBarack Obama, osanda kunqamula iUS President’s Emergency Plan for AIDS, ngakho-ke eqeda imithi esindisa izimpilo zezinkulungwane zezakhamizi zakulelidolobha ezibhedlela ezimbili ezisedolobheni kanye nomtholampilo obungaphansi kwenhlangano engalawulwa nguhulumeni elokishini laseMlazi. NgeSonto, ezinye izishoshovu zaseThekwini ezibhekene nemithi yokulapha zizobhikisha futhi kwiNgqungquthela Yomhlaba Yengculaza eWashington, behlanganyele nomfelandawonye obizwa ngokuthi Gcina iSethembiso (Keep the Promise) bexhaswe nguMbhishsobhi Omkhulu uDesmond Tutu kanye nabanye osaziwayo.
Omunye umbhikisho waseThekwini, mhlazingu 6 kuNtulikazi, wambandakanya ukushiswa kwamathayi kanye nokuvinjwa komgwaqo eMarianridge, ngesikhathi izakhamizi zisola ikhansela lendawo ngokusweleka kwezindlu.
Ngaba ufakazi kokubhikisha izikhawu ezimbili eNingizimu neTheku ngesonto eledlule. Lapho kunemboni yamafutha eJacobs ngoLwesihlanu ekuseni, imboni edume kabi kakhulu engcolisa umoya emkhathini, iFFS Refiners,engochwepheshe bokuqoqa udoti odalwe ngamafutha, yayibhekwe ngamehlo abomvu ngababhikishi abangu77 benhlangano iSouth Durban Community Environmental Alliance.Isikhulu esiphezulu salemboni, uDon Hunter,okade ayephika mayelana nokungcoliswa komoya womkhathi yiFFS futhi edala okunikisa ‘okomchamo wamakati’ (methanethiol), kodwa waze wabanjwa izisebenzi ezingamavila zikamasipala ezibhekelela umnyango wezempilo mayelana nezemvelo (iphunga laqala cishe eminyakeni emibili edlule), ngakho-ke lokhukubhikisha kwakukuncane kodwa kwaba nokuphumelela okubalulekile.
Ukuhlangana kwabezinhlanga zamabala ahlukene kulombhikisho, mayelana nodaba oluhkunaisa kakhulu, oluhambisana nobandlululo olusha endaweni yasedolobheni, kwenzeka ngokufika kwezishoshovu ze ‘Occupy Umlazi’kanye na-Abahlali baseMjondolo. Lolubumbano lwaleneka ezinyangeni ezimbalwa ezedlule , ngesikhathi lapho ukunganakekeli kwezimboni zezokuthutha kuphoqa ababhikishi iningi labo okwakungabasebenzi abamhlophe abangu400 ukuthi bahlasele umgwaqo omkhulu uSolomon Mahlangu (Edwin Swales) oxhumanisa iNingizimu yeTheku kuthelawayeka uM4.
Umzabalazo omkhulu lapha ukuthatha kabusha indawo evulelekile yeNingizimu neTheku kwizimboni ezibulala ezemvelo kanye nomasipala ongenandaba, umzabalazo oqhubekayo ngoLwesine ebusuku eMerebank Community Centrelapho izishoshovu zizobe zicubungula ukuhlehlisa uhlelo lwedolobha lokwakha i ‘Back-of-Port’ ebiza izigidigidi ezingu30 zamadola ($30 billion). Futhi ngalokho sibonga ukujula kwechweba laseThekwini – okuyilona elikhulukazi eAfrika –kanye nokumumatha kwalo ukwazi ukudiliza imikhumbi emikhulu esuke ithwele amacontainer angu15 000 ngesikhathi esisodwa, indawo entsha yamacontainer kanye naleli chweba elizombiwa (lapho okwakuyisikhumulo sezindiza esidala khona) kuyogudluza imiphakathi emikhulu engomakhelwane.
Lezizindawo zihlanganisa iClairwood,lapho izakhamizi zamaNdiya kanye nabaNsundu, kusukela kwizifundiswa kuya kubahlali basemjondolo, abakade bengaphansi kwengcindezi ngezokuthutha ebezihamba kulendawo ngokungemthetho kanye nephunga elinobungozi lokukhiqizwa ngamakhemikhali iminyaka ngeminyaka. Emva kwesigamu kade kuneNgqungquthela Yomhlaba Yamazwe Omhlaba Mayelana Nokuguquguquka Kwesimo Sezulu, ukuphafuza kakhulu komoya ongcolile emkhathini okuhlanganiswa nezimboni zamafutha kanye nekwandiswa kwechweba kwenza inhlekisa inkulumo yomphathi wedolobha ukuthi singabanendaba nezemvelo.
Uma usuka ngemizuzu engu15 ushayela imoto eningizimu nechweba, i-Occupy Umlazi iyaqhubeka endaweni eyihlashana ethathwe kulelilokishi elikhulu kuWard 88, kude buduze nasendaweni yokucima ukoma edume kabi iMax’s Lifestyle Club ehanjwz kakhulu ngababusi bendawo abamnyama. Itenda elikhulu lalihlonyiwe eduze kwehovisi lekhansela lika Khongolose uNomzamo Mkhize, obelokhu ezibana nokubhikisha kwabantu kulamaviki amabili edlule. Emhlanganweni wangeSonto ntambama lapho kwakukhona izakhamizi ezingu200, unobhala waBahlali Basemjondolo uBandile Mdlalose wakhombisa ubuholi obungenakwesaba, ebheka ukuthi abaseki bakaKhongolose babenza umsebenzi wababusi ongcolile emijondolo eseduzane yaseZakhele. Lapho, sekuzophela inyanga edlule, izishoshovu ze-Occupy Umlazi uNoxolo Mkanyi kanye noMkhayi Simelane badutshulwa balala esibhedlela ngesikhathi behlaselwa ezinzulwini zobusuku yizigelekeqe zezombusazwe.
Amakhilomitha ambalwa uma uya eningizimu, elokishini laseFolweni, umfana uMxolisi Buthelezi wadutshulwa emhlane wafa ngesibhamu iR5 ngenkathi ebalekela amaphoyisa, ngesikhathi abantu abangu1500 bebhikishela ukulethwa kwezidingongqandi mhazingu1 kuNtulizaki. Imizamo yabo yazama kancane ukubuyisela emuva ukunyuka kokugibela amatekisi okwakunyuke ngamaphesenti angu25. Iphoyisa okusolwa ukuthi labulala uButhelezi, uMsizi Chiliza, wazibulala emva kwezinsuku ezimbalwa.
Ukugcwala koDlame ITheku like libe idolobha elinodlame olubi, egcwele ukubangisana kwamaqembu ezombusazwe okulungiswa ngokudubulana. Izikhulu eziphambili zikamasipala zisebenzisa abavikeli – okumbandakanya ngisho umphathi wamaphoyisa –kodwa-ke eqinisweni owasatshiswa emva kwendlela ongxiwankulu abangobhululu babemsababisa emva kophenyo olwalumelene nenkohlakalo, uMbiko iManase, eyayingakhombi kuphela owayenguSobaba weTheku uObed Mlaba kanye nomphathi kamasipala uMike Sutcliffe, kodwa namakhansela ambalwa kanye nezimboni abaxhumene nazo. Izimboni ezimbalwa ezinobhululu zisaqhubeka zihlomula ngezinkontileka noma kunobufakazi bomsebenzi omahlaphahlapha, amakhulu ezakhiwo zabo ziyawa esimeni sezulu zezimvula ezinkulu.
Ukugcwala kodlame kuchaza ukusabisa kwangobusuku bangoLwesihlanu olwedlule, lapho amaphoyisa aseThekwini ehamba ngemoto engabhaliwe ngokusolakala elandela unobhala wenhlangano kazwelonke yabasebenzi bensimbi (metalworkers), uIrvin Jim, ephuma kwingqungquthela enkulu Yenhlangano YaseNingizimu Afrika Yamakhomanisi (SACP) eyayisenyakatho neKwaZulu-Natal. Lokhu kwenza abantu bacabange ukuthi ngabe kwakukhona ababeqashwe ukumsoconga uma sesibheka ukuthi lenhlangano ibhekwa kabi ngababusi ngokuba ezimele kakhulu ngokomqondo kanye futhi nokugqugquzela ukuthi imikhiqizo yesizwe ibuswe ngabantu.
Umholi Weqembu Lamakhomanisi uBlade Nzimande akazange alusukumele phezulu ukukhathazeka kukaJim, ethi lawomadoda ayeqaphe uSobaba weTheku uJames Nxumalo kodwa alahleka. Engakholwa kahle yilamazwi, okhulumela inhlangano kaJim, uCatsro Ngobese wachaza iphuzu lokuthi imoto eyayinalabafo, oyedwa wabaqaphi bakaJim wabhekana naye, “Okumangalisayo ukuthi babengalazi igama likaSobaba, futhi okubi kakhulu babengawaphethe amakhadi ayengqkuqinisekisa ukuthi basebenzela amaphoyisa aseNingizimu Afrika. Izimoto zabo zazinezinombolo okungezona ezazo futhi babehlome beyizingovolo.”
Lesisiwombe senzeka emva kokungasombululwa kokubulawa komholi kaKhongolose kulesisifundazwe uWandile Mkhize zingu2 kuNtulikazi, emva kwengqungquthela yemigomo yeqembu elibusayo eyzyinobuhixihixi. Umyalezo kamakhalekhukhwini wokugcina kaMkhize – kowayengumholi weNhlangano Yabasha bakaKhongolose uFikile Mbalula – wawuqukethe ukuzihlambulula, “Izindaba namanga esizitshela njengamalunga kwabanye benu abaholayo kwaqhubeza ukujulisa ubuhixihixi,” okusho ukuthi phakathi kwabasha kanye nezikhulu zikazwelonke zeqembu elibusayo.
Ukuxabano bodwa ngaphakathi eqenjini yikho futhi okuthiwa kwaholela ekubulaweni kwesikhulu esiphambili saseThekwini sikaKhongolose, uSbu Sibiya, kungakapheli sikhathi-nje kade kudutshulwe kwabulawa ikhansela likaKhongolose uWiseman Mshibe. Abaholi abambalwa abahlubuka kulaqembu iNkatha Freedom Party – neNational Democratic Party – nabo futhi basocongwa ngonyaka odlule
Zonke izishoshovu lapha ziyazi ngesiteshi samaphoyisa akwaKito (Cato Manor), eselokishini labamnyama (ngenzansana-nje kwesikgungo semfundo ephakeme iNyuvesi yaKwaZulu-Natal lapha ngibhala khona). Idlanzana lamaphoyisa ayaphenywa ngokuzimatanisa nabasocongi balesisisteshi sakwaKito, okubikwa ukuthi sebekhiphe izidumbu ezingaphezulu kuka50 kuleminyakana.
Ukumelana naMandla Okungenamkhawulo
Iningi lezishoshsovu zemiphakathi yaseThekwini zilahlekelwe izimpilo zazo zisocongwa noma zibulawa ngamaphoyisa eminyakeni eyisihlanu edlule, okumbandakanya noMbongeleni Zondi eMlazi, uJimmy Mtolo weSouth African National Civic Organisation eNew Germany, isishoshovu saseClairwood uAhmed Osman, uRajah Naidoo waseMerebank, kanye nomfundi wasesikhungweni semfundo ephakeme iNyuvesi yaseNingizimu Afrika uMthoko Nkwanyana.
Ezimeni ezinjalo, njengoba kwakwenzeka ngesikhathi sobandlululo, ukusocongwa kuqondakala sengathi ukuhlonishwa: ukwaziswa ukuthi izishoshovu zenza umsebenzi omuhle zibhekene namandla okubusa asendaweni, nawo aklinyekile ngenxa yengcindezi yamandla ezwelonke kanye nawo mhlaba wonke ukuze alwe nabaphikisayo, ukuze bakwazi ukwenza imigomo enzima okuyiyona eholela kulomibhikisho egcwele umhlaba wonke.
Kodwa. iNingizimu Afrika, yona inenkinga yezishoshsovu eziningi kanye nabahlaziyi abagqugquzela umqondo wasezindaweni zabo oqala futhi uphele ngamakhansela kamasipala, umphathi wedolobha noma uSobaba wedolobha. Kunabaholi abaningi ababhekelele kakhulu izindawo zabo, abahlulekayo ukuhlanganisa amathuba amakhulu imibhikisho kanye nezikhalo zabasebenzi, zemiphakathi kanye nezemvelo, futhi bacabangele umhlaba wonke ngesikhathi benza umsebenzi wasezindaweni zabo.
Okuqinisa idolo kodwa, mhlawumbe, eKapa, iSouth African Municipal Workers’ Union kanye nezinhlangano zasendaweni zemiphakathi sezikhombisa indlela entsha ngekusasa lokubhikisha, lapho mhalzingu5 kuNtulikazi amakhulukhulu amasha ngokubumbana bemelene nokungalethwa ngendlela kwezidingongqangi kanye nendlela kaSomama uPatrica DeLille yobungxiwankulu mayelana nohlelo lwemisebenzi yomphakathi, okufana nokuqhekeza izinhlangano zabasebenzi ngenxa yokusebenza izikhashana. Sekusho-ke umholi wenhlangano yabasebenzi uMario Jacobs, “Ngokuzayo sihlela ukuhlanganisa izinhlangano eziningi futhi size nabantu abaningi ukuthi babe ingxenye yalokhu.”
Lokhu okwenzeka eKapa ukuthi ngabe imibhikisho yemiphakathi ingakwazi ukuyenga ukuxhaswa ngabasebenzi noma ngabe futhi bona, njengezinye okuqhamuka kulelizwe, bagcina sebevumele ukuthi imibhikisho yabo igcine isinqotshwe ukungenelela kweqenjana likaKhongolose ukuthi kucwaswe abokufika noma ukuthunjwa (noma ingcindezi). ENingizimu Yonke, imizamo efanayo ukuhlanganisa izinhlangano zabasebenzi namaqembu asemalikishini, emaphandleni kanye namele ezemvelo – ikakhulukaziiDemocratic Left Front eholwa ngabe ngamalunga eqembu lamakhomanisi, kanye nomkhankaso iMisebenzi Eyisigidi Yesimo Sokushintsha Kwezullu ozinze eAlternative Information and Development Centre eKapa–okunye futhi lokhu okwenza ukuthi sizihlole ukuthi ngabe ikhona yini inqubekela phambili.
Umangabe leziziqubu zokubhikisha ezinesibindi ziqhubeka, ingenxa yokuthi sekunoquqaba olusha lwezishoshovu ezivela manje ezinganamandla kodwa eziphikelelayo. Umangabe bengasatshiswa amaphoyisa noma izixhwanguxhwangu zamaqembu ezombusazwe, igxatho labo elilandelayo ukusondelela embusweni futhi kufanele bahlanganise, imibhikiso yasezindaweni zabo kube inhlangano enkulu kakhulu kunesibalo sezinye izingxenye, bese futhi belwa nezinkinga ababhekene nazo nabezombusazwe: hayi bamelane-nje nekhansela lendawo lapha nalaphaya, kodwa bamelana nohlelo lwezomnotho olusabalele okuyilona olwenza ukuthi emhlabeni wonke jikelele saziwe njengomphakathi ohlala abantu abahlukene kakhulu ngamazinga okuphila.
UPatrick Bond ungumqondisi weCentre for Civil Society eseThekwini.